जाजरकोटको मह अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २४, २०७५१४:२७0
जाजरकोट, २४ माघ । यहाँको नलगाड नगरपालिका–१ पाली, कल्पतको कात्तिके मह यसवर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने भएको छ । पाली, कल्पतको कात्तिके मह अस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुवई र कोरिया जाने भएको हो ।
४ तस्विरमा हेर्नुहोस भारतका धनाढ्य अंबानीकी छोरी ईशाको विवाह पछि पहिलो फोटाशूट
सावधान ! यी दिशामा सिरानी पारेर सुत्दा आउँछन यस्ता समस्याहरु !
अनुशासन पालना नगर्ने एक हजार ५३४ कर्मचारी कारवाहीको सिफारिसमा